Goobtaadu ma leedahay "Sii Bax"? | Martech Zone
Bartaadu Ma Leedahay “Ka Bax”?
Monday, July 26, 2010 Axad, Janaayo 19, 2014 Douglas Karr
Markii aan la shaqeeyo qaar ka mid ah xirfadleyda SEO, waxay riixaan mugga raadinta ugu sareysa ama ereyada ugu tartamaya. Markaan la shaqeeyo warbaahinta dhaqameed, waxay had iyo jeer riixayaan kubadaha indhaha oo gaarayaan. Markii aan la shaqeeyo ragga warbaahinta bulshada, waxay had iyo jeer cabiraan taageerayaasha iyo kuwa raacsan. Markii aan la shaqeeyo naqshadeeyayaasha, waxay rabaan inay u qaabeeyaan go'aamada ugu yar.
Ma dhagaysto iyaga.
Suuqgeyntu kuma xirna aqoonsiga hooseeyaha guud ee ugu hooseeya si loo kordhiyo suurtagalnimada gaaritaanka ama qaybinta. Suuqgeeye ahaan, mararka qaar ololuhu wuxuu noqon karaa in lagu aqoonsado hal kheyraad ama saameyn ku yeesho si sax ah loo sheego. Waxay ku saleysan tahay awooddooda, waqtiyada ololaha, iyo dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee aan dooneyno inaan gaarno. Mararka qaarkood taasi maaha hooseeyaha gabi ahaanba - waa bartilmaameed jilicsan, si fiican loo dhigay oo diirada la saaray ujeeddo gaar ah.
Waxaan jebiyaa xeerarka.
Boggeygu waxay jebiyaan sharciyo badan. Qof ayaa tilmaamay in, in kasta oo aan ku riixo macaamiishayda inay qaabeeyaan goobo ay ku qoran yihiin xarfaha farqiga sare ku leh asalka iftiinka, annaga wakaaladda warbaahinta cusub goobta waxaa loogu talagalay taariikh madow iyo farta fudud… akhriska oo aad uga dhib badan. Saaxiibbada kale waxay tilmaameen inaysan sidoo kale ku habboonayn laptop yar oo xallinaya.
Runtu waxay tahay, ma doonayo inaan ku soo jiito dadka soo booqda kitaabadaha netka ama laptops ka duqoobay Waxaan rabaa inaan fiiro gaar ah ka helo dadka leh qaraarada balaaran. Ma doonayo inaan soo jiito shirkado aan ka casriyeyn doonin Internet Explorer 6. Xitaa ma doonayo dadka inay aqriyaan boggeyga. Waxaan rabaa inay eegaan oo ay la yaabaan bal in aan iyaga caawin karo iyo inkale… oo ay ku riixaan foomka websaydhka.
Hadaadan diidanayn, ma tihid rajadayda.
Waxaan leeyahay sicir barar sare. Taasi waa fiicantahay. Ma doonayo sicir barar hooseeya. Waxaan rabaa in aan soo jiito dad badan oo adeegsada mashiinka raadinta, laakiin waxaan rabaa in dadkaas ay helaan aragti deg deg ah oo ay ka baxaan ama ku xirmaan. Faahfaahin weyn kama bixin doono waxa aan u qabanno shirkadaha… taasi waa sababta oo ah waxaan daneynaynaa shirkad kasta oo weyn. Ujeeddada degelkeygu waa in aan u qalmo hoggaamiyeyaasha intooda badan oo aan ku dhiirrigeliyo inta hartay inay naga qabtaan.
Balooggan, dabcan, wuu ka duwan yahay. Waxaan mari doonnaa dib u habeyn kale oo bishaan ah si aan u wanaajinno gaaritaanka iyo qeybinta goobta, iyo sidoo kale soo jiidashada soo booqdayaal badan. Hadafkeena iyo dakhliyada laxiriira waxay ka faa'iideysanayaan markaan gaarno booqdayaal badan. Weli waxaan kudareynaa qaabab naqshadeyn ah oo loogu talagalay adeegsadayaasha casriga ah, laakiin ma dooneyno inaan xaddidno dhagaystayaashayada.
Goobtaadu ma leedahay “Iska Joog”? Waa caadi!
Suuqgeynta qadka tooska ah had iyo jeer maahan inaad gaarto dad badan intaad awoodo, mararka qaar waxay ku saabsan tahay inaad niyad jabiso dhagaystayaasha qaldan. Waa sababta aan uga soo horjeeday isticmaalka nidaamyada sida Digg ee loogu talagalay goobaha shirkadaha. Marar badan waxay si fudud u aaseen goobta waxayna sababaan arrimo farsamo iyadoon lagu darin hal booqde oo khuseeya.
Waxaa jira waxyaabo qaas ah oo aad sameyn kartid si aad u soo jiito oo aad u leexiso dhagaystayaasha bartaada shirkadda ama barta internetka. Ha ka baqin inaad jebiso sharciyada.
Bakhaylnimo, Cabsi iyo Ganacsato Fashilmay
Sirtayada Aruurinta Qalabka Mashiinka
Jul 27, 2010 markay ahayd 11:46 AM
Tani waa waxa aan ka jeclahay internetka iyo adduunka suuq geynta, xeerarka kaliya ayaa ah inaysan jirin xeerar! Inta himilooyinka la dejinayo, horumarka ayaa la raad raacayaa natiijooyinkuna waa kuwo togan, maxaa kale oo muhiim ah?
Doug, waxa aan kugu xushmeeyo waa baqdin la'aantaada inaad mowqif istaagto oo aad ra'yigaaga dhiibto. Waxay dadka ka dhigeysaa inay si adag u fikiraan, waana taa dhimbiilaha ugu wanaagsan ee hal-abuurnimo guuleysi leh oo qofku weydiisan karo.
Jul 27, 2010 markay tahay 3:27 PM
Mahadsanid Harrison - waad saxantahay Waa hadafka la xisaabtamayo.